राजधानीमा तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड सम्पन्न – इ – डायरी एक्सप्रेस
विभिन्न विधाका ४२ भन्दा बढी सर्जकलाई अवार्ड र विविध क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सम्मान
बैंकिङ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूट (बीएमटीआई)को प्रस्तुतिमा शनिबार राजधानीमा तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड सम्पन्न भएको छ । बोस्टर मिडियाको आयोजनामा भएको अवार्डमा क्यापिटल इन्टरटेनमेन्टले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गरेको थियो भने टीभी इको वान, म्यूजिक खबर र रेडियो भ्वाइस अफ नेपालको मिडिया सहकार्यमा अवार्ड समारोह सम्पन्न भएको हो ।
गीत संगीत तथा अन्य विभिन्न विधामा ४२ भन्दा बढी सर्जजकलाई अवार्ड प्रदान गरिएको समारोहमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो । बोस्टर मिडियाका सल्लाहकार भवानीप्रसाद पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको अवार्ड सामारोहमा साहित्यकार राधेश्याम लेकाली, राजु श्रेष्ठ व्यवसायी, चलचित्र कलाकार संघका उपाध्यक्ष तथा बरिष्ठ निर्देशक मोहन निरौला, वरिष्ठ हास्य कलाकार लय संग्रौला, वरिष्ठ हास्य कलाकार उत्तम केसी, चलचित्र निर्देशक जनक खकुरेल, व्यवसायी तथा समाजसेवी राजु श्रेष्ठ, व्यवसायी तथा समाजसेवी प्रकाश श्रेष्ठलगायतले अवार्ड तथा सम्मान प्रदान गर्नुभएको थियो । वोस्टर मिडियाले विगत आठ वर्षदेखि अनलाइन न्युज पोर्टल सञ्चालन गर्दै आएको छ भने विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आउनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान तथा अवार्ड प्रदान गर्दै आइरको छ । अवार्ड समारोहमा एञ्जल र आशिकाले स्वागत नृत्य गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम संयोजक माधव निर्दोषले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
समारोहमा कोभिड हिरो सम्मानबाट कमला श्रेष्ठ अध्यक्ष लायन्स क्लव अफ नेपाल काठमाडौं आर्शिर्वाद तथा लोटस फेसन मेट्रो, शुशिला श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्ष लायन्स क्लव अफ काठमाडौं आर्शिवाद तथा आकाश भैरव फिटनेस सेन्टर, कुमुद छत्कुली भट्ट, प्रिन्सिपल हाइड एण्ड सिक किन्डरगार्डेन सानोभ¥याङ र वाङ्चुक राप्तेन लामा, संस्थापक अध्यक्ष किमोलुगं फाउण्डेशन नेपाललाई सम्मानित गरिएको थियो ।
यस्तै विधागत सम्मानमा गायिका विद्या तिवारी, लेखक, पत्रकार तथा गीतकार गीता अधिकारी, ¥याप मोडल एन्जल श्रेष्ठ, गायक÷मोडल दिपेन्द्र सोनाम, समाजसेवी देवीमाया आचार्य, मेकअप आर्टिष्ट गीता उप्रेती, लोकदोहोरी गायिका सीता सिदाली मगर, पप÷आधुनिक गायिका पारु रञ्जीत, पप÷आधुनिक गायिका छुनु गुरुङ, इभेन्ट म्यानेजर नवराज देउवा, स्वतन्त्र पत्रकार गोकर्ण बराल, पत्रकार राज लुइँटेल, विनर अफ मिस नेक्स्ट सुपर स्टार सोनिया राज्यलक्ष्मी शाही ठकुरीलाई प्रदान गरिएको थियो । उहाँहरुलाई सम्मानपत्र, दोसल्ला, खादा तथा मालाले सम्मान गरिएको थियो ।
समारोहमा ज्वेल च्यागंलाई बेष्ट म्युजिक अवार्ड, रुपा मानन्धरलाई उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्ट अवार्ड (म्युजिक भिडियो), रामभक्त जोजीजुलाई उत्कृष्ट पाश्र्व गायन अवार्ड (फिल्म तिम्रो हुने कहिले), कृष्ण रसाललाई उत्कृष्ट मोडल लोक आधुनिक (खोलीतिरैमा), भीष्मराज फूलरा उत्कृष्ट जूरी अवार्ड (साहित्यकार), कविता सुनाम उत्कृष्ट डेव्यू मोडल (लघु चलचित्र–धोका), रवीचन्द्र कोइराला उत्कृष्ट चलचित्र सिनेमेटोग्राफर, पुरुषोत्तम पराजुली उत्कृष्ट चलचित्र सिनेमेटोग्राफर, सुस्मीता खत्री उत्कृष्ट छायाँकन लघुचलचित्र, रेश्मा केसी, उत्कृष्ट प्रोडक्सन डिजाइनर (फिल्म तिम्रो हुने कहिले) र बाबुकाजी श्रेष्ठ उत्कृष्ट सोसल अवार्डको प्रदान गरिएको थियो ।
यस्तै रिंकु ढकाललाई उत्कृष्ट शैक्षिक अवार्ड, राजु श्रेष्ठलाई उत्कृष्ट विजनेश अवार्ड, संगीता खत्रीलाई उत्कृष्ट लघु चलचित्र सम्पादक, गीतु शाहलाई उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्ट जुरी, श्यामराज श्रेष्ठलाई उत्कृष्ट निर्देशक, नारायण भट्टराईलाई उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्ट, सुनिता मरासैनीलाई उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्ट, अमरबहादुर विश्वकर्मालाई उत्कृष्ट लघु चलचित्र निर्देशक, कमल अधिकारीलाई उत्कृष्ट पप÷आधुनिक संगीतकार र प्रदिप रसाइलीलाई उत्कृष्ट आधुनिक गीत निर्देशकबाट अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी सुष्मा ठकुरीलाई उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायिका, रुचि घिमिरेलाई उत्कृष्ट पप गायिका, पूजा मारियालाई, उत्कृष्ट गीतकार आधुनिक, चिरञ्जीवी भण्डारीलाई उत्कृष्ट पप गायक, प्रतिमा गुरुङ उत्कृष्ट पप गीतकार, रवी सिंह उत्कृष्ट पप मोडल, जोहन श्रेष्ठ उत्कृट इभेन्ट अर्गनाइजर, सुरज पौडेललाई उत्कृष्ट लोक पपगायक, अनिता गिरीलाई उत्कृष्ट मोडल, टेकबहादुर लामालाई उत्कृष्ट कोरियोग्राफी र राजेश थापालाई उत्कृष्ट संगीतकार, सुगम संगीतबाट अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
त्यस्तै सामारोहमा सन्दीपा वाटालाई उत्कृष्ट डेव्यु मोडल, भोला पौडेल, उत्कृष्ट गीत मिक्सिङ, तुलसी प्रसाद श्रेष्ठलाई उत्कृष्ट अभिनय, चक्रबहादुर कुँवरलाई उत्कृष्ट रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोता, पूजा न्यौपाने÷कमल खत्रीलाई उत्कृष्ट युगल गायन, मेलिना राईलाई उत्कृष्ट उत्कृष्ट गायिका सुगम संगीत, टेकराज पाण्डेलाई मेकअप आर्टिष्ट जुरी, शेखर खनाललाई हाँस्य कलाकार जुरी, रिता केसी उत्कृष्ट गायिका लोकआधुनिक, राजु गिरीलाई उत्कृष्ट चलचित्र निर्देशक, पुरन बोहरालाई उत्कृष्ट डिजइनर र ज्वेल च्यागंलाई बेष्ट म्युजिक अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
अवार्ड समारोहमा प्रमुख अतिथि महत्तले यस्ता अवार्डले सर्जकहरूलाई काममा अझ उत्प्रेरण प्रदान गर्ने बताउनुभएको थियो । यस्तै अन्य अतिथिहरूले पनि सर्जकको सम्मानका लागि गरिएको अवार्डको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।
भीष्मराज फुलारालाई उत्कृष्ट जूरी अवार्ड
वरिष्ठ साहित्यकार भीष्मराज फुलारालाई उत्कष्ट जुरी अवार्ड साहित्य विधाबाट प्रदान गरिएको छ । उहाँलाई राजधानीमा शनिबार सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा उक्त अवार्डले विभुषित गरिएको हो । समारोहका प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले फूलारालाई अवार्ड, सम्मान पत्र, खादा र माला प्रदान गर्दै अवार्ड प्रदान गर्नुभएको थियो । साहित्यकार फूलारा बहुआयामिक व्यक्तित्वले विभूषित हुनुहुन्छ । फुलारा लिटरेचर फाउन्डनेशन नेपालको अध्यक्ष, राष्ट्रिय साहित्यिक समाज नेपालको महासचिव, काइट्स इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि.को कार्यकारी निर्देशक, अन्तर्राष्ट्रिय लेखक संघ प्यान नेपालको सदस्यलगायत दर्जनौ संघ संस्थामा रहेर विभिन्न जिम्मेवारी बहन गरिरहनु भएको छ । उहाँका आधा दर्जनजति साहित्यिक कृति पाठकमाझ आइसकेका छन् ।
गायिका विधा तिवारीलाई सम्मान
गायिका विधा तिवारीलाई सम्मान गरिएको छ । उहाँलाई राजधानीमा शनिबार सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा सम्मान गरिएको होे । अवार्ड समारोहका प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उहाँलाई सम्मानपत्र, दोसल्ला, खादा र माला प्रदान गर्दै सम्मान गर्नुभएको हो । पछिल्लो समय स्रोता÷दर्शकको रोजाइमा पर्नु भएकी गायिका तिवारीका थुप्रै गीत स्रोता÷दर्शकमाझ लोकप्रिय रहेका छन् । उहाँका गीतले लोकप्रियता पाइरहँदा अवार्ड, सम्मान तथा पुरस्कार पनि प्राप्त गरिरहेका छन् ।
तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्डको निर्णायकमा शिव परियार
गायनबाट स्रोताको मन मष्तिकमा राजगर्न सफल गायक शिव परियार तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहको निर्णयकमा शिव परियार रहनु भएको छ । उहाँले अवार्डमा गीत संगीतका विधाको निर्णयकका रुपमा भूमिका निभाउनुभएको आयोजकले जनाएको छ । अवार्ड समारोह शनिबार राजधानीमा सम्पन्न गरिएको छ । सो अवसरमा अवार्ड समारोहका प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले परियारलाई निर्णयकको प्रमाण पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । शिव परियारका थुप्रै गीत स्रोता÷दर्शकमाझ लोकप्रिय रहेका छन् । उहाँका सार्वजनिक भएका धेरै गीत स्रोताको ओठमा झुण्डिन सफल छन् ।
हाँस्य कलाकार जुरीको अवार्ड शेखर खनाललाई
देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा शनिबार स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गर्दै सम्पन्न भएको अवार्ड समारोहमा हाँस्य कलाकारको जरी अवार्ड शेखर खनाललाई प्रदान गरिएको हो । तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा प्रमुख अतिथि डा. रामशरण महत्त तथा अन्य विशिष्ट अतिथि र अतिथिहरूले शेखरलाई अवार्डको ट्रफी, प्रमाणपत्र, खादा र माला प्रदान गर्नुभएको थियो । शेखर हाँस्य क्षेत्रमा आफ्नौ पहिचान कायम गर्न सफल हुनुहुन्छ । उहाँको लोकप्रियतासँगै उहाँले यो क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान कायम गर्न सफल हुनुभएको छ । शेखरले आफ्ना थुप्रै हाँस्य प्रस्तुतिमार्फत दर्शकको मन मस्तिष्कमा आफूलाई पु¥याउनु भएको छ । उहाँका प्रस्तुतिमा हास्यसँगै सन्देशमूलक हुने गर्दछ ।
लघुचलचित्रको उत्कृष्ट छायाँकनको अवार्ड सुस्मीता खत्रीलाई
लघु चलचित्रको उत्कृष्ट छायाँकारको अवार्ड सुस्मीता खत्रीलाई प्रदान गरिएको छ । राजधानीमा शनिबार सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा खत्रीलाई लघुचलचित्र ‘धोका’बाट उत्कष्ट छायाँकाकारको अवार्ड प्रदान गरिएको हो । समारोहमा प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत तथा अन्य अतिथिले खत्रीलाई अवार्ड तथा प्रमाण पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । सुस्मीताले यो क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनु भएको छ । उहाँका क्रियशन पृथक हुने गर्दछन् । यसैले त उहाँले एक पछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै जानुभएको छ ।
रेश्मा केसीलाई उत्कृट प्रोडक्सन डिजाइनरको अवार्ड
रेश्मा केसीलाई उत्कृष्ट प्रोडक्सन डिजाइनरको अवार्ड प्रदान गरिएको छ । उहाँलाई चलचित्र ‘तिम्रो हुने कहिले’बाट उत्कृष्ट प्रोडक्सन डिजाइनरको अवार्ड प्रदान गरिएको हो । बैंकिङ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूट (बीएमटीआई)को प्रस्तुतिमा शनिबार राजधानीमा सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा उहाँलाई प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत तथा अन्य अतिथिहरूले अवार्ड र प्रमाणपत्र तथा खादा, माला प्रादन गरेका थिए । बोस्टर मिडियाको आयोजनामा भएको अवार्डमा क्यापिटल इन्टरटेनमेन्टले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गरेको थियो भने टीभी इको वान, म्यूजिक खबर र रेडियो भ्वाइस अफ नेपालको मिडिया सहकार्यमा अवार्ड समारोह सम्पन्न भएको हो ।
तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्डको निर्णायकमा देवेन्द्र पाण्डे
म्युजिक भिडियो निर्देशक देवेन्द्र पाण्डे तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्डको निर्णयकमा रहनु भएको छ । यो अवार्ड समारोह शनिबार राजधानीमा एक विशेष कार्यक्रमबीच सम्पन्न भएको छ । अवार्ड समारोहमा विभिन्न विधाका सर्जकलाई अवार्ड प्रदान गरिएको थियो भने समाजमा आ आफ्नो क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउने विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो । पाण्डे आफैँमा कुशल निर्देशक हुनुहुन्छ । उहाँले थुप्रै गीतका भिडियोमा कुशल निर्देशकको जिम्मेवारी निभाउनु भएको छ । उहाँ पछिल्लो समय धेरैको रोजाइमा पर्न सफल निर्देशकका रुपमा हुनुहुन्छ ।
उत्कृष्ट लघु चलचित्र सम्पादकको अवार्ड संगीता खत्रीलाई
उत्कृष्ट लघु चलचित्र सम्पादकको अवार्ड संगीता खत्रीलाई प्रदान गरिएको छ । उहाँले राजधानीमा हालै सम्पन्न भएको एक अवार्ड समारोहमा उक्त विधाको अवार्ड चुम्न सफल हुनुभएको हो । राजधानीमा शनिबार सम्पन्न तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा खत्रीलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । समारोहका प्रमुख अतिथि डा. रामशरण महतले उहाँलाई लघुचलचित्र ‘धोका’बाट उत्कृष्ट लघु चलचित्र सम्पादकको अवार्ड प्रदान गर्नुभएको हो । खत्रीलाई प्रमुख अतिथि तथा अन्य अतिथिहरूले अवार्ड तथा प्रमाण पत्र र खादा माला प्रदान गर्नुभएको थियो ।
उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्टको अवार्ड गीता शाहलाई
उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्टको जुरी अवार्ड गीता शाहलाई प्रदान गरिएको छ । शाहलाई राजधानीमा शनिबार सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्टको जुरी अवार्ड प्रदान गरिएको हो । शाहलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत्त र अन्य अतिथिले अवार्ड, प्रमाण पत्र, खादा र माला प्रदान गर्नुभएको थियो । नेपालको मेकअप क्षेत्रमा शाहले आफूलाई अब्बल राख्दै आउनु भएको छ । उहाँ मेकअप आर्टिष्टका सँगै प्रशिक्षकका रुपमा पनि काम गर्दै आउनुभएको छ ।
तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्डको निर्णयकमा किशोर थापा
बरिष्ठ साउण्ड रेकर्डिष्ट किशोर थापा तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्डको निर्णयकमा रहनु भएको छ । यो अवार्ड समारोह शनिबार राजधानीमा एक विशेष कार्यक्रमबीच सम्पन्न भएको छ । कोरोना संक्रमणको समयमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै अवार्ड सम्पन्न गरिएको हो । अवार्ड समारोहमा बरिष्ठ रेकर्डिष्ट थापालाई प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत्तले निर्णायकको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । थापा नेपालका साउण्ड रेकर्डिष्टमा अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो । उहाँले थुप्रै गीतमा साउण्ड रेकर्डिष्टको कार्यगर्नु भएको छ । उहाँले रेकर्डिष्टका रुपमा काम गर्नुभएको धेरै गीत चर्चित तथा लोकप्रिय रहेका छन् ।
उत्कृष्ट चलचित्र निर्देशकको अवार्ड श्यामराज (श्यामराजा) श्रेष्ठलाई
उत्कृष्ट चलचित्र निर्देशकको अवार्ड श्यामराज (श्यामराजा) श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ । वरिष्ठ निर्देशक श्रेष्ठलाई चलचित्र ‘दृष्टि’बाट सर्वोत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड प्रदान गरिएको हो । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा प्रमुख अतिथि डा. रामशरण महत, बरिष्ठ कलाकार तथा निर्देशक लय संग्रौला, उत्तम केसीलगायतका विशष्टि व्यक्तिहरूले श्रेष्ठलाई अवार्ड, प्रमाण पत्र तथा माला र खादा प्रदान गरेका थिए । निर्देशक श्रेष्ठले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचना बनाउन सफल हुनुभएको छ । उहाँले निर्देशन गरेका धेरै चलचित्रले दर्शकको माया पाउन सफल भएका छन् । उहाँको निर्देशनमा राम्रा राम्रा चलचित्र नेपाली दर्शकमाझ आएका छन् ।
उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्टको अवार्ड नारायण भट्टराईलाई
तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्टको अवार्ड नारायण भट्टराईले चुम्न सफल हुनु भएको छ । राजधानीमा शनिबार सम्पन्न भएको अवार्ड समारोहमा उहाँले सर्वोत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्टको अवार्ड चुम्न सफल हुनुभएको हो । भट्टराईलाई अवार्ड समारोहका प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत तथा अन्य विशिष्ट अतिथिले अवार्डको ट्रफी, प्रमाणपत्र, माला र खादा प्रदान गर्नुभएको थियो । नेपालको मेकअप क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउने नामका रुपमा भट्टराईको नाम आउने गर्दछ । उहाँ मेकअप प्रशिक्षकका रुपमा पनि रहँदै आउनुभएको छ । उहाँले थुप्रै विद्यार्थीलाई मेकअप सम्बन्धि प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको छ भने मेकअप सम्बिन्धी विभिन्न लेख रचना पनि उहाँका प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।
तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्डको निर्णायकमा हिमाल केसी
नेपाली चलचित्रमा क्षेत्रमा द्वन्द्व निर्देशकका रुपमा ख्याति कमाउनु भएको हिमाल केसी तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्डमा निर्णायकका रुपमा रहनु भएको छ । यो अवार्ड राजधानीमा हालै सम्पन्न भएको छ । राजधानीमा एक विशेष कार्यक्रमबीच पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको प्रमुख आतिथ्यतामा अवार्ड समारोह सम्पन्न भएको हो । अवार्ड समारोहमा केसीलाई निर्णयकको प्रमाण पत्र प्रमुख अतिथि महत्तले प्रदान गर्नुभएको थियो । हिमाल केसीले द्वन्द्व निर्देशकका रुपमा थुप्रै लोकप्रिय नेपाली चलचित्र दर्शकमाझ पस्किनु भएको छ । उहाँले निर्देशन गरेका धेरै चलचित्रले व्यवसायिक सफलता प्राप्त गर्नुका साथै दर्शकको सर्वाधिक रोजाईमा पर्न सफल भएका छन् ।
उत्कृष्ट रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताको अवार्ड चक्रबहादुर कुंवरलाई
उत्कृष्ट रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताको अवार्ड चक्रबहादुर कुंवरले चुम्न सफल हुनुभएको छ । उहाँले राजधानीमा शनिबार सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा उक्त अवार्ड चुम्न सफल हुनुभएको हो । अवार्ड समारोहका प्रमुख अतिथि डा. रामशरण महत तथा अन्य अतिथिले महत्तलाई अवार्डको ट्रफी, खादा, माला र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । कुँवरमा स्वरको जादु छ भने विभिन्न विषय वस्तुलाई सटिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने कारण उहाँले रेडियोमा प्रशारण गर्ने सामाग्री स्रोताको प्रतिक्षामा रहने गर्दछ । उहाँका रेडियो फ्यानहरू धेरै रहेका छन् । अन्य कार्यक्रम प्रस्तोता भन्दा फरक ढंगले विषयवस्तुलाई स्रोता माझ पस्किएका कारण नै उहाँको लोकप्रियता बढदै गएको छ । लोकप्रियता बढदै जादा उहाँले विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको
उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्टको अवार्ड सुनिता मरासिनीलाई
नेपाली मेकअपको क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्दै गइरहनु भएको सुनिता मरासिनीलाई उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्टको अवार्ड प्रदान गरिएको छ । बैंकिङ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूट (बीएमटीआई)को प्रस्तुतिमा शनिबार राजधानीमा सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा उहाँलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । बोस्टर मिडियाको आयोजना र क्यापिटल इन्टरटेनमेन्टको इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा सम्पन्न भएका अवार्ड समारोहमा मरासिनीलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा. रामशरण महत र अन्य विशिष्ट अतिथिहरूले अवार्ड, प्रमाण पत्र, माला र खादा प्रदान गर्नुभएको थियो । सुनिता मेकअप आर्टिष्टका रुपमा नेपालमा अग्रपंक्तिमा रहेका नाम हो । उहाँको मेकअप कलाले सर्वत्र चर्चा पाउने गर्दछ । उहाँ विशिष्ट मेकअप आर्टिष्टका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ यो क्षेत्रमा ।
उत्कृष्ट लघुचलचित्र निर्देशको अवार्ड अमरबहादुर विश्वकर्मालाई
उत्कृष्ट लघुचलचित्र निर्देशको अवार्ड अमरबहादुर विश्वकर्मालाई प्रदान गरिएको छ । विश्वकर्मालाई हालै राजधानीमा सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । एक विशेष समारोहबीच देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा सम्पन्न भएको अवार्ड समारोहमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत तथा अन्य विशिष्ट अतिथिहरूले उहाँलाई अवार्डको ट्रफी, प्रमाणपत्र, खादा तथा माला प्रदान गरेका थिए । विश्वकर्माको निर्देशनमा रहेका प्रस्तुतिलाई धेरै मन पराउने गर्दछन् । यसमा उहाँको विशेष दख्खल रहँदै आएको छ । कुनै पनि प्रस्तुतिलाई फरक ढंगले दर्शक माझ पस्किन सक्नु नै उहाँको खुबी रहेको छ । उहाँका क्रियशनमार्फत उहाँको लोकप्रियता बढदै गएको छ भने विभिन्न मान सम्मान तथा अवार्ड प्राप्त गर्न उहाँ सफल हुँदै आउनु भएको छ ।
तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्डको निर्णयकमा कपिल गिरी
राजधानीमा हालै सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेट अवार्डको निर्णयकमा गीतकारको तर्फबाट गीतकार कपिल गिरी रहनु भएको थियो । अवार्डमा समारोहमा सहभागी विभिन्न विधा मध्ये कपिलले गीतकारको रुपमा निर्णय भूमिका निभाउनु भएको थियो । शनिबार सम्मपन्न भएको अवार्ड समारोहमा कार्यक्रमका प्रमुख अथिति डा. राम शरण महत्तले गिरीलाई निर्णायकको प्रमाण पत्र प्रदान गर्नु भएको थियो भने अन्य विशिष्ट अतिथिहरूले माला र खादा लगाइदिनुभएको थियो । गीतकारका रुपमा गिरी आफ्नै राजमार्गमा नेपाली गीतिफाँटमा हुनुहुन्छ । उहाँले लखेका थुप्रै गीत लोकप्रिय रहेका छन् ।
उत्कृष्ट प्रोडक्सन डिजाइजनरको अवार्ड पुरन बोहोरालाई
उत्कृष्ट प्रोडक्सन डिजाइजनरको अवार्ड पुरन बोहोरालाई प्रदान गरिएको छ । राजधानीमा शनिबार सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेट अवार्डको बिशेष समारोहमा उहाँलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । समारोहका प्रमुख अतिथि डा. रामशरण महत्त तथा अन्य विशिष्ट अतिथि तथा अतिथिले बोहोरालाई अवार्ड, प्रमाणपत्र, माला र खादा प्रदान गर्नुभएको थियो । बैंकिङ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूट (बीएमटीआई)को प्रस्तुतिमा अवार्ड सम्पन्न भएको थियो । पुरन प्रोडक्सन डिजाइनरका रुपमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ । उहाँका काम गर्ने तौरतरिका र कामप्रति समर्पणका कारण नै उहाँ सबैको लोकप्रिय रहँदै आउनुभएको छ । पुरनको फरक तौर तरिकाका कारण नै विशिष्टता पस्किन सक्नुहुन्छ । उहाँको यही खुबीका कारण उहाँले थुप्रै मान सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ ।
Previous कथा, निर्देशकीय र अभिनय पक्षहरू सबै उत्कृष्ट हुनुपर्छ